Homeसमाचारनेपालमै पहिलोपटक गुल्मीमा भेटियो यस्तो अचम्मको गाई – लगातार ७ बर्ष देखि यस्तो !
March 28, 2021 admin समाचार 4873
गुल्मी । कहिले सुन्नु’भएको छ त ? गाईमा देबी देवताको अवतार । मलाई लाग्छ सायद सुन्नभएको छैन र तपाईले सोच्नुहुन्छ कि भगबान भनेको कलि’युुमा हुदैन भनेर तर हामी सोच्छौ कि जस्ले राम्रो फल र सेवा दिन्छ उ नै भगबान हो । हो आज हामी जनाबरको रुपमा आएका एक भगबानको अवता’रको बारेमा यहा“ कुरा गर्दैछौ ।
यो घटना हो गुल्मी छत्रकोट गाउपालिका हुु“गा झेर्दी भन्ने ठाउको जहाका टिकाराम न्यौपानेको घरमा यस्तो’ अचम्मको गाई रहेको छ जस्को बारे आज हामी यहा“ चर्चा गर्दैछौ । प्राय सबै नेपालीहरु गाइलाई लक्ष्मी माताको रुपमा पुज्ने गर्छन र हिन्दू धर्माव’लम्बी त झन गाईलाई सर्बश्रेष्ठ प्राणी मान्दै देबी’को अवतार मान्छन ।
हो यो गाई पनि कुुनै देबी देव’ताभन्दा कम छैन किनकि यस्ले ७ बर्षदेखि यसरी सेवा गरेको छ कि मानिसहरु र त्यहा वरिपरि देख्ने गाउले’हरु तिन छक पर्छन । यो गाईले लगातार ७ बषैदेखि एकनास एउटै मात्रामा दूूध दिईरेहको छ र सबैलाई अचम्म बनाएको छ । कुनै पनि जनावरले यति धेरै दूूध दिनु भनेको आफैमा एउटा अचम्मको बिषय पनि हो र यसमा यति मात्र नभएर अझ धेरै बिशेष’ताहरु पनि रहेका छन्। – ओएस नेपालबाट
March 22, 2022 admin समाचार 1146
April 8, 2021 admin समाचार 6013
August 10, 2021 admin समाचार 5412